Nacaybka Xidhiidh Xumada Ubadka Iyo Waalidka ! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Nacaybka Xidhiidh Xumada Ubadka Iyo Waalidka !
Nacaybka Xidhiidh Xumada Ubadka Iyo Waalidka !
Dhacdooyinka yaabka leh ee ku jira diiwaanka TV-GA Alan ee Dubai gaar ahaan barnaamijka Qaraa’ib waxa ka mid ah qisadan:
Islaan maalqabeen ahayd oo 85 jir ah oo u dhalatay dalka Usteriya ay jeexjeexday lacag dhan hal malyuun oo Yuru ah oo ay iyadu lahayd.
Islaantan ayaa lacagtaasi kidiftay ka hor intii aanay ku dhiman xarun dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo ay ku jirto. Islaanta ayaa la sheegay inay diidanayd inay lacagtaasi ka dhaxlaan caruurteeda iyo kuwa ay sii dhaleen.
Xeer ilaaliye ka tirsan Austeria aya sheegay in aanay cadayn sababta ay islaantu lacagta xadigaasi leeg u googaysay waxase laga yaaba ayuu yidhi inay tahay cadho ay u qabto ehelkeeda oo ku ilaabay xaruntaasi.
Xeer ilaaliyuhu wuxu intaasi ku daray isagoo u waramayay wakaalada wararka Farasniiska in arinkan aan laga dhigi doonin fal denbiyeed sidaas darteedna aan loo furayn fayl, madaama lacagta kaydkeeda ah ay iyadu xor u ahayd.
Dadka degan xarunta islaantu lagu hayay ayaa ka soo saaray maydkeed makhsinkii ay deganayd iyadoo ay dhinaceeda yaallaan lacagtaasi ay googoysay iyo weliba jeegagii iyo cadaymihii kale ee Baanka oo iyana ay dhamaantood kidiftay sida laga soo xigtay wargeyska Corer.
Laakiin dhaxlayaasha ayaa la sheegay inay weli fursad u haystaan inay helaan lacagtaasi sida maamulayaasha baanka Austeria laga soo xigtay haddii aanay ahayn mid faalso ah. Ku xigeenka Baanka ayaa isna Wargeyska u sheegay in haddii dhaxlayaashu ay keenaan waraaqihii googo’ay dhamaantood oo ay sax noqdaan ay xaq u leeyihiin in baanku u bedelo.
Previous articleTalooyinka Waalidku Bixiyaan
Next articleCali Khaliif Heshiis La’aan Ma Dhinteen, Hadduu C/risaaq Khaliif Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Ahaan-lahaa”Gudoomiye Faysal Cali Waraabe”